नेपालमा मदिरा आयात | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण नेपालमा मदिरा आयात
नेपालमा मदिरा आयात
नेपालमा वर्षेनि मदिरा सम्बन्धी पेय पदार्थको आयात प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यसबाट राजस्वमा उल्लेख्य रूपमा योगदान भइरहेको छ । तसर्थ यो केकति मूल्यको आयात भइरहेको छ, यसबारे भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाई संक्षिप्त रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विगत ५ वर्षमा भएको कुल मदिराको आयात विवरण हेर्दा परिमाण तथा मूल्य दुवै हिसाबले क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा कुल आयात रू. १ अर्ब ९६ करोडको भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः आयातमा सामान्य वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । गत आव २०७४/७५ मा कुल रू. ३ अर्ब ३ करोड मूल्यको मदिरा आयात भयो । उक्त वर्ष मदिराबाट मात्र करीब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो ।
यसैगरी कुल मदिरा सम्बधी पेय पदार्थ अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका तथा विभिन्न घनत्व भएका मालवस्तु आयात विवरणमा देखिन्छ ।
१. जौबाट बनेको बियर
४. मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ
यस प्रकार मदिरासँग सम्बद्ध वस्तुहरूको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयात हुनेमा मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ देखिन्छ । यसमा खासगरी अनडिनेचर्ड इथायल, अल्कोहल, स्प्रिट, लिकर्स र अन्य स्पिरिचुअस वेभरेजेज पर्छन् । आव २०७४/७५ मा यसको आयात रू.१ अर्ब ८० करोडको भएको थियो । यसको आयात आव २०७०/७१ मा भने रू.१ अर्ब ८ करोडको मात्र भएको थियो । दोस्रो आयात हुनेमा विभिन्न प्रकारको ह्विस्की अन्तर्गतको अल्कोहल र स्प्रिट पर्छ । यद्यपि पहिलोको तुलनामा यसको आयात मूल्य निकै कम छ । गत आव २०७४/७५ मा यसको आयात करीब रू. ८१ करोड ७८ लाखको भयो । आव २०७०/७१ मा रू. ५७ करोड ३३ लाखको मात्र आयात भएको थियो । तेस्रो आयात हुने मदिरा सम्बन्धी वस्तुमा वाइन हो, जसमा ताजा अंगुरको वाइन र फोर्टिफाइड वाइन समेत पर्छ । गत आवमा यसको आयात करीब रू. ३५ करोड ९२ लाख बराबरको भयो ।
मदिरासम्बन्धी वस्तुको आयात सिजन अनुसार हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा उदाहरणको रूपमा गत आर्थिक वर्षको आयातलाई लिन सकिन्छ । गत आव २०७४/७५ मा कुल आयात भएको मदिरासम्बन्धी पदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी जेठ महीनामा रू. ५२ करोड ५६ लाख मूल्य बराबरको आयात भएको थियो भने सबैभन्दा कम कात्तिक महीनामा रू. ७ करोड ८२ लाखको उक्त मालवस्तु आयात भएको थियो । असोज, माघ र असार महीनामा पनि आयात उल्लेख्य थियो । उक्त महीनाहरू प्रत्येकमा करीब रू. ३१ करोडको आयात भएको थियो ।
यसै गरी गतवर्षलाई आधार मान्दा प्रमुख रूपमा कुनकुन देशबाट नेपालमा मदिराको आयात भयो होला ? पहिलो नम्बरमा संयुक्त अधिराज्य थियो, जहाँबाट रू. १ अर्ब १७ करोडको आयात भयो । दोस्रोमा भारतबाट रू. ९४ करोड बराबरको । तेस्रोमा फ्रान्सबाट रू. २८ करोड बराबरको मदिरा आयात भएको थियो । यस्तै अन्य देशहरूमा अष्ट्रेलियाबाट रू. ११ करोड, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट रू. १० करोड ५८ लाख तथा चीनबाट रू. ६ करोड बराबरको मदिरा सम्बन्धी पदार्थ प्रमुख रूपमा आयात भएको देखिन्छ ।